Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်)
Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Operoxolid ကို နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းပိုးဝင်ရောဂါများ၊ နမိုးနီးယား အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊အရေပြားပိုးဝင်ခြင်းနှင့် လိင်အင်္ဂါပိုးဝင်ခြင်းများကို ကုသရန် အများဆုံး အသုံးပြုပါသည်။
Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
တရက်နှင့် တရက် ဆေးသောက်ချိန်တူလျှင် အာနိသင်အကောင်းဆုံးရရှိစေပါသည်။
ဆေးကို အစာမစားမီ ၁၅ မိနစ်အလို သို့မဟုတ် အစာမရှိဘဲသောက်သင့်ပါသည်။ (အစာ စားပြီးလျှင် ၃ နာရီကျော်ကြာမှ သောက်ပါ။) အစာမရှိဘဲသောက်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ဆရာဝန် သောက်ခိုင်းသည့်အချိန်အထိ ဆက်သောက်ပါ။
ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းများအတွက် ဆေးကို ၅ရက်မှ ၁၀ရက်အထိသောက်ရပါသည်။ သို့သော် ဆရာဝန်က ပိုသောက်ခိုင်းသည်များလည်း ရှိပါသည်။
Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Operoxolid (သောက်ဆေး)ကို ၃၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ်အောက် မှာသိမ်းပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Operoxolid ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Operoxolid ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Operoxolid ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Operoxolid ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Operoxolid ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
ခွဲစိတ်ကုသမှုများ ခံယူရန်၊ မေ့ဆေးပေးရန်၊ သွားနှင့် ခံတွင်းကုသမှုများခံယူရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင်
roxithromycin နှင့် macrolide ဆေးအနွယ်ဝင်များဖြစ်သော azithromycin, clarithromycin , erythromycin စသည့်ဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း ဖြစ်ဖူးလျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ခံစားရပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။
ပါးစပ်ထဲတွင် အဖြူဖတ်များဖြစ်ခြင်း၊ လျှာနှင့် ပါးစပ်များ နာကျင်ခြင်း
မိန်းမကိုယ်တွင် အဖြူဖတ်များဖြစ်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ယားခြင်း၊ အရည်များ ထွက်ခြင်း
အရေပြား နီရဲခြင်း၊ ယားယံခြင်း
မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်းနှင့် လျှာများဖောရောင်ခြင်း
ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲတွင် ဓါတ်မတည့်မှုများ ဖြစ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးရပ်လိုက်ပြီး ရက်သတ္တပတ်များ အတွင်းအောက်ပါ လက္ခဏာများ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။
မခံမရပ်နိုင်အောင် ဗိုက်ရစ်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း
ရေကဲ့သို့ ဝမ်းသွားခြင်း၊ သွေးဝမ်းသွားခြင်း
အထက်ပါတို့ တပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါ ပြင်းထန်သောဆိုးကျိုးများ ကို ခံစားရလျှင် နီးစပ်ရာဆေးခန်းသို့ ချက်ချင်းသွားပြရပါမည်။
ဗိုက်အပေါ်ပိုင်းတွင် ပြင်းထန်စွာ နာကျင်ပြီး ကျောဘက်အထိ နာကျင်ခြင်း
အန်ခြင်း (မုန့်ချိုအိတ်ရောင်ခြင်း၏ လက္ခဏာများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။)
ပြင်းထန်စွာ အဆက်မပြတ် ဝမ်းလျှောခြင်း
အရေပြားများ နီရဲလာကာ အရည်ကြည်ဖုများဖြစ်ခြင်း၊ (အထူးသဖြင့် မျက်လုံးများ၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်နှင့် မိန်းမကိုယ်များတွင်) တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Operoxolid ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ operoxolid (roxithromycin)နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးများမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်ပါသည်။
Rifabutin and bromocriptine (which use the CYP3A liver enzyme)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Operoxolid က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Operoxolid ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါများ၊ အသည်းရောဂါများ (အသည်းခြောက်ခြင်း၊ အသည်းရောင်အသားဝါဖြစ်ခြင်း၊ ရေဖျင်းစွဲခြင်းများ ရှိလျှင်) သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
တနေ့တာအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ
300 mg ဆေးတပြား တနေ့တကြိမ်
150 mg ဆေးတပြား တနေ့ ၂ ကြိမ်
150 mg ဆေး၂ပြား တနေ့တကြိမ်
သင်ဖြစ်နေသော ရောဂါအခြေအနေအပေါ် မူတည်ပြီး ဆေးပမာဏကွာခြားပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလိုလေးသော ကလေးတစ်ယောက်အတွက် တနေ့တာအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ
300 mg (မနက်တွင် 150 mg ညတွင် 150 mg)ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလို အောက်ကလေးများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဆေးပမာဏမရှိပါ။
(ယေဘူယျအသိပေးချက် – အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ)
Operoxolid (အိုပီရိုဇိုလစ်ဒ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Operoxolid ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Operoxolid ၁၅၀ မီလီဂရမ် ဆေးပြား
Operoxolid ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 13, 2018
OPEROXOLID (ROXITHROMYCIN) USES. http://www.ndrugs.com/?s=operoxolid. Accessed December 13, 2016
APO-Roxithromycin. http://www.news-medical.net/drugs/APO-Roxithromycin.aspx. Accessed December 13, 2016.
နား ၊ႏွာေခါင္း ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းေရာဂါမ်ား, ကျန်းမာရေးစင်တာ